La Liga Archives - Football Legend
အသက် (၃၃) နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ဂိုးသွင်းစက်ကြီး လူးဝစ်ဆွာရက်ဇ်ဟာ နည်းပြသစ် ရော်နယ်လ်ကိုးမင်းရဲ့ အနာဂတ်အစီအစဉ်ထဲမှာ မပါဝင်တော့ဘူးလု့ိ သတင်းတွေထွက်နေသလို၊ အပြောင်းအရွှေ့အလားအလာရှိတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဆွာရက်ဇ်ဟာ ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်မှာ ဥရုဂွေးက နေစီယွန်၊ နယ်သာလန်က ဂရိုနင်ဂျန် နှင့် အေဂျက်စ် ၊ အင်္ဂလန်က လီဗာပူးလ် နှင့် စပိန်မြေမှာဆိုရင် ဘာစီလိုနာအသင်းတို့မှာ ကစားခဲ့ဖူးသော်လည်း အီတလီမြေမှာ တကြိမ်တခါမှကစားခဲ့ဖူးခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ နည်းပြအပြောင်းအလဲလုပ်ထားသည့် စီးရီးအေ ချန်ပီယံ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ ဆွာရက်ဇ်ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ Goal.com ကဖော်ပြထားပါတယ်။ ပီယာလိုကလည်း အသင်းကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်နေပြီး တိုက်စစ်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှူး ဂွန်ဇာလို ဟီဂူအင်ကို ဒီနွေရာသီမှာ အသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ ဒီအတွက်ကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အဲဗာတန်အသင်းကို ရောင်းထားတဲ့ လူငယ်လေး မွိုက်ကိန်းကို အဌားနဲ့ ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းနေသည့်အပြင် ဆွာရက်ဇ်ကိုပါ...
ကမ္ဘာဘောလုံးလောကကို တုန်လှုပ်စေခဲ့တဲ့ “ဘာစီလိုနာကနေ ထွက်ခွာဖို့ မက်ဆီတောင်းဆိုလိုက်ပြီ” ဆိုသည့် စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ဘောလုံးပရိသတ်တွေအားလုံး ဂယက်ရိုက်ကုန်ကြတယ်။ အားကစားမီဒီယာတွေအားလုံး အလုပ်တွေရှုပ်ကုန်ကြတယ်။ မက်ဆီတစ်ယောက် ဘာစီလိုနာက ထွက်ရင် ဘယ်အသင်းကို ပြောင်းမှာလဲ ? ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲ? အားလုံးက စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ ဘာစီလိုနာကို အသက် ၁၄ နှစ်ကတည်းက ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ကတ်တလန်မြေကလွဲလို့ တခြားဘယ်အသင်းကိုမှ ပြောင်းဖို့ စိတ်တောင်မကူးဘူးတဲ့ မက်ဆီက အသင်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့ မက်ဆီသာ ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံး ပြောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့အသင်းကတော့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဖြစ်တယ်လို့ Evening Standard သတင်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းမှ တပတ်ကို ပေါင် ၁သန်း နီးပါးခံစားခွင့်ရရှိထားပါတယ်။ ဘောလုံးလောကမှာ မက်ဆီ လက်ရှိရနေတဲ့ လစာကိုပေးနိုင်တဲ့အသင်းက လက်ချိုးရေတွက်လို့ရတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၊ မန်ချက်စတာစီးတီး၊ PSG ဒီ(၃) သင်းကတော့...